Torohevitra fiarovana amin'ny fiarovana ny mpiasa irery (A10001) | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autisme / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Ny mpiasa irery dia olona miasa irery, lavitra ireo fotodrafitrasa mahazatra tsy misy fanaraha-maso akaiky na mivantana ary miasa amin'ireo sehatra mampidi-doza indrindra toy ny fananganana, loharanon-karena voajanahary, fitsaboana, fampiharana na fitaterana. Misy sokajy roa amin'ny mpiasa irery matetika. Voalohany, ireo izay miasa amin'ny toeram-piasana omena / omena; ireo izay miasa ao anatin'ny toeran'ny orinasa izany hoe ny olona izay tonga voalohany ao amin'ny birao dia manao hetsika toy ny fanokafana vavahady, birao fanadiovana na mody tara rehefa avy mihidy ao amin'ny birao ny zavatra tsirairay. Faharoa, ireo izay mihetsika; ireo mpiasa irery finday izay any amin'ny faritra lavitra sy miasa ivelan'ny toeram-piasana. Raha mikasika ny lalàna sy ny lalàna dia andraikitry ny fikambanana ny manome fiarovana azo antoka amin'ny mpiasa irery. Hodinihintsika eto ny loza mety hitranga mifandraika amin'ireo mpiasa irery, ny fomba hiantohan'ny orinasa amin'ny fiarovana ny mpiasa sy ny vahaolana maoderina amin'ireo olana mitaiza ireo.
Ny loza mitatao amin'ny mpiasa Lone Workers
Tetezana mampidi-doza na latsaka: Matetika izy io rehefa miasa amin'ny trestle, gorodona fisaka, tohatra na amin'ny haavony ny mpiasa lélona iray. Ny antony lehibe ao ambadiky ny fahalavoana dia mety ho tany mando, tohatra ary dingana, latsaka ao amin'ny efitrano fandroana ary manimba ny tany. Ny antony iray hafa dia mety ho toe-tsaina tsy matihanina, ohatra, ny fanaovana kiraro tsy miaro amin'ny asa izay mety hitarika mankany amin'ny fikatsahana eny an-tampony dia ohatra iray hafa dia tsy fananana fiarovana rehefa miasa amin'ny haavony.
Lozam-pifamoivoizana: Ny lozam-pifamoivoizana fahita matetika amin'ny mpiasa lery dia ny aretim-po sy ny fahatapahana mety hiteraka olana lehibe eo amin'ny fahasalamana raha toa ka tsy omena laharam-pahamehana ny fanampiana voalohany. Anisan'ireo tranga momba ny adin-tsaina mifandraika amin'ny toeram-piasana; Ny fihenjanana amin'ny lozabe dia zava-doza kokoa. Ny adin-tsaina momba ny zava-tsarotra dia lozam-pifamoivoizana, fahavoazana na aretina mahafaty ao amin'ny toeram-piasana izay mety hiteraka tratran'ny alahelo. Indrindra amin'ny mpiasa irery adin-tsaina dia mety hiteraka lozam-pifamoivoizana lehibe.
Herisetra ataon'ny mpiasa: Rehefa miasa any amin'ny toerana lavitra iray ny mpiasa iray, dia misy olona iray avy amin'ny besinimaro afaka manohitra azy ary manimba azy ary tsy afaka mamaly izany ny fikambanana. Ny herisetra amin'ny mpiasa hafa dia ny feo tonga avy amin'ny asa izay ahitan'ity olona ity marary sy mahavita ny fihainoany.
Afo sy fipoahana: Mpiasa miasa amin'ny toeram-pitrandrahana na mifandray akaiky amin'ny zavatra mifandraika amin'ny herinaratra; mety ho iharan'ny afo sy ny fipoahana izy ireo. Izany dia azo hamaivanina amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana mety sy ny fanarahana tanteraka ny SOP. Na izany aza, ny afo dia loharanon'ny fandrehitra izay mety hiteraka fipoahana ary tsy afaka hiatrika an'io toe-javatra io irery ny mpiasa irery. Ireo mpiasa mitokana dia tokony hofanina ampy hiatrehana tranga toy izany.
Fambara simika: Ny mpiasa irery ao amin'ny laboratoara dia miharihary hatrany amin'ny zavatra simika izay mety hitarika olana amin'ny olana ara-pahasalamana mahery vaika indrindra amin'ny fofonaina.
Toerana misy ankehitriny: ahoana no fomba hiantanan'ny orinasa ny fiarovana ny asa an-tany Lone:
Amin'izao fotoana izao dia mampiasa fomba isan-karazany ny orinasa hiatrehana ireo loza mety hitranga atrehin'ireo mpiasa irery. Voalohany, ny fomba mahazatra indrindra dia ny fanomezana azy ireo ny Personal Protective Equipments (PPEs) izay afaka manampy azy ireo hiatrika ireo toe-javatra tsy ilaina. Faharoa, ny fikambanana dia mampiasa ny mariky ny fifandraisana tsy am-bava mba hisorohana ireo tsy fahombiazana diso tafahoatra rehefa mando ny gorodona, misento toy izany koa izy ireo rehefa misy zavatra simika ao amin'ny laboratoara, manana fambara loza izy ireo. Ankoatr'izay dia mandeha mitsidika sy mifampiresaka matetika amin'ny alàlan'ny radio sy telefaona finday ny fikambanana no fomba mahazatra hiatrehana ny toe-javatra. Ireo fomba mahazatra rehetra ireo dia ampiasaina manerana ireo fikambanana mba hanomezana fanampiana ho an'ny mpiasan'ny Add Form ireo tontolo iainana azo antoka sy salama. Fa rehefa miova izao tontolo izao; koa, toy ny fomba fiasa sy ny metodolojia hisorohana ireo toe-javatra tsy ilaina ireo. iHelp dia vahaolana tokana tokana ho an'ny ahiahy rehetra voalaza etsy ambony. Ny vokatray manampy aho tsy vitan'ny hoe manome vahaolana ho an'ireo olana ireo fa sady mahay ihany koa. Miova izao tontolo izao, miova ny safidy aleony, tsy tokony hiova ve isika? manampy aho mety hampamora sy mora kokoa ny olana mifandraika amin'ny asanao; Manaova fijery fohy eto ambany;
iHelp - Olon'ny rafitra ambanin'ny olombelona - vahaolana làlam-pandeha ho an'ny mpiasa an-trano
Izy io no fitaovana GPS GPS manerantany kely indrindra izay manome fonosana feno vahaolana ho an'ny mpiasa irery. Miaraka amina simika ary misy koa GPS tracker izay hanome anao fotoana tena fanaraha-maso ny mpiasa lone. Ankoatr'izay, misy sensor detection latsaka ary koa mandefa fampandrenesana ny fahalavoana marina amin'ireo mpanara-maso. Manolotra anao ho fampiharana finday maimaimpoana koa izay ahafahanao manara-maso ireo mpiasa loneo. Mety manontany tena ianao hoe ahoana ny fomba fiasan'io fitaovana io. Rehefa sendra tandindona ny mpiasa iray, dia afaka manindrona ilay bokotra eo amin'ny fitaovana izay handefa hafatra miaraka amin'ny toerana izy ary hiantso anao. Faharoa, raha misy olona latsaka avy amin'ny Havoazana algorithm sensory dia handefa hafatra ho anao izay misy ny toerany. Na izany aza, azonao atao koa ny mametraka toerana manokana ho an'ny mpiasa raha mivoaka ivelan'io faritra io izy dia hisy hafatra hoentinao aminao miaraka amin'ny toerany. Manampy anao hanana fifandraisana roa miaraka amin'ny mpiasa irery izany, amin'ny alalanao izany dia afaka miresaka aminy ianao ary hahafantatra ny tena toe-javatra iainan'izy ireo. Misy ihany koa ny fiasa amin'ny alalanao manamarina ny tantaran'ny toerana lone mpiasa amin'ny alàlan'ny hahafantaranao hoe taiza izy no niasa taloha. Raha tsorina dia manome ny vahaolana feno ianao mba hanaraha-maso ireo mpiasa lefona ary hanamaivana ny risika fahita matetika amin'ny mpampiasa lone.
5765 Total Views 11 Views Today
Ahoana ny fanatsarana ny fiarovana ny mpiasa an-trano (A10001)
Miaro ny mpiasa: Manokana fotoana (A10002)
Fanatanterahana ny rafitra ambanin'ny olombelona / fiarovana ny mpiasa an-trano (A10002)
Torohevitra momba ny fampiasana GPS Tracker hisamborana olona tsy mendrika…